Global Voices teny Malagasy » Nandao an’i Arabia Saodita mitondra tantara manafintohina marobe ireo Bangladeshita mpiasa an-trano mpifindra monina · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 19 Novambra 2019 5:36 GMT 1	 · Mpanoratra পান্থ রহমান রেজা (Pantha) Nandika (en) i Rezwan, Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Atsimo, Arabia Saodita, Bangladesh, Fahasalamàna, Fanoherana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fitantanam-pitondrana, Lalàna, Mediam-bahoaka, Politika, Sendikà, Tsidika, Vehivavy sy Miralenta, Vonjy Voina, Zon'olombelona
Rojo olombelona ao Dhaka manohitra ny fampijaliana ireo mpiasa an-trano Bangladeshita any Arabia Saodita. Sary avy amin'i Ekramul Haque. Nahazoana alalana.
Nanana fanantenana lehibe hanana fiainana tsaratsara kokoa sy fahafahana hanala ny fianakaviany amin'ny fahantrana izy ireo. Betsaka ireo nandeha tany Arabia Saodita mba hiasa ho mpiasa an-trano, mandoa vola any amin'ireo sampan-draharaha mba hahatanteraka ny nofinofiny. Saingy rava ny nofinofin'izy ireo rehefa nifanehatra tamina karazana fanararaotana an-tokantrano, anisan'izany ny fanararaotana ara-nofo . Tsy afaka manohy, maro ireo mpiasa an-trano nandositra  ny mpampiasa azy ary voatery niverina nody. Hatramin'izao, tamin'ity taona ity dia mpiasa an-trano miisa 900 no niverina nody  avy any Arabia Saodita alohan'ny hifaranan'ny fifanekena arak'asa nataon'izy ireo. Ary mihoatra ny 6.000 ny isan'ireo vehivavy mpiasa an-trano tafaverina mialoha tao anatin'ny efa-taona farany.
Tsy tranga fanararaotana ara-batana, ara-tsaina na ara-pananahana ihany izany. Maherin'ny 100 ireo mpiasa an-trano Bangladeshy namoy ny ainy tany Afovoany-Atsinanana nandritra ny sivy volana voalohany tamin'ny taona 2019 – ka 36 no namono tena.
Tao anatin'ny taona vitsivitsy izay, marobe  ireo horonantsary an-tserasera nipoitra niresaka  momba ireo tantaran'ny fanararaotana  mihatra amin'ireo mpiasa an-trano.
Vao haingana ihany koa no nisy horonantsary  iray niparitaka mikasika ilay mpiasa an-trano Bangladeshita iray tany Arabia Saodita izay niangavy mafy mba alefa mody no sady miafina amin'ny mpiherisetra aminy ao anaty trano fidiovana.
Nilaza i Sumi Akter, 25 taona, fa niharan'ny herisetra ara-batana sy ara-nofo nataon'ireo mpampiasa azy, izay nanondraka menaka mangotraka teo amin'ny sandriny izy. Nogadraina nandritra ny 15 andro izy ary zara raha nisakafo.
Taorian'ny niverenany tany Bangladesh, dia nisy vehivavy mpifindra monina iray nitantara  fa nampiasaina toy ny andevo izy:
[…] Rehefa tonga tany Arabia Saodita aho, dia namidy tamina tompon-tany aloha. Nandositra an'io trano io aho taorian'ny fanararaotana marobe. Avy eo tratran'izy ireo aho ary namidiny 6 lakh Bangladeshi Taka (7000 dolara Amerikana) indray tamin'ny orinasa iray. Fantatro fa misy tovovavy an-jatony maromaro tahaka ahy any izay voatery mivaro-tena. Nahavita niantso ny vadiko indray mandeha aho ary nilaza taminy ny zava-drehetra. Avy eo izy nifandray tamin'ny Masoivoho Bangladesh ao Arabia Saodita ary farany dia voavonjy aho.
Fantatra ho fikambanana tsy miankina lehibe indrindra manerantany ho an'ny fampandrosoana ny BRAC , izay miara-miasa amin'ireo mpiasa mpifindra monina any Bangladesh ihany koa. Namoaka horonantsary fohy momba ireo mpiasa vehivavy mpifindra monina Bangladeshita any Arabia Saodita izay mitantara ny fanararaotana maro atrehin'izy ireo ihany koa ny BRAC:
Ny hany fanavotana manoloana ity fanararaotana ity dia ny mitatitra any amin'ny polisy saingy fanamby izany noho ny olana eo amin”ny fiteny. Ankoatra izay, araka ny filazan'ny  ambasadaoron'i Bangladesh any Arabia Saodita, dia maro ireo niharam-boina lasa tratran'ny ratran-tsaina ka te-hiverina hody haingana ary maro no tsy mijanona ela hiatrika raharaham-pitsarana. Koa matetika tsy misy ny fepetra raisina ho an'ireo mpiherisetra. Raha ny nambaran'ny masoivoho Bangladeshita, nampahafantarina momba ireo raharaha ireo ny governemanta Arabiana Saodita.
Ny isan'ireo mpiasa an-trano any Arabia Saodita
Hatramin'ny taona 1970 dia maro ireo Bangladeshita lehilahy mpiasa mpifindra monina nankany Arabia Saodita mba hitady asa. Saingy, na eo aza ny tantaran'ny vehivavy manatevin-daharana ny mpiasa mpifindra monina Bangladeshita izay fohy kokoa, dia marobe ny isan'izy ireo ankehitriny. Hatramin'ny taona 2015, mihoatra ny 200.000 ny isan'ireo Bangladeshita mpiasa an-trano any Arabia Saodita.
Nahasarika ny sain'ny vahoaka  nandritra ny taona maro ireo tranga fanararaotana ara-batana mihatra amin'ireo olona tombanana ho 9 tapitrisa  any Arabia Saodita. Talohan'izay, Indonezia sy Filipina no loharanon'ny vehivavy mpiasa an-trano tany Arabia Saodita. Saingy tamin'ny taona 2015, raha mitanisa ireo tranga fanararaotana sy fampijaliana. dia noraràn'i Indonezia  ny fandefasana mpiasa vehivavy ho any Arabia Saodita. Najanon'i Sri Lanka  sy ny Filipina ihany koa ny fandefasana ireo mpiasa vehivavy talohan’ izany. Nakatona ho an'i Bangladesh ny tsenan'ny asa an-trano Saodiana nanomboka tamin'ny taona 2008; na izany aza, namoaka tolotr'asa hitady mpiasa avy any Bangladesh i Arabia Saodita tamin'ny taona 2015 ary ny ifanarahana dia mandefa vehivavy iray isaky ny lehilahy roa mandeha (quota lahy-vavy 2: 1). Nanaiky ny tolotra ny governemanta Bangladeshita ary karama ofisialy 800 Riyals Arabiana Saodita (213 dolara Amerikana) isam-bolana no napetraka ho an'ny mpiasa vehivavy – ambany dia ambany noho ny raisin'ny mpiasa Filipiana na Indoneziana.
Nilaza ny tatitra  nataon'ny Gazety Saodiana fa ireo mpiasa an-trano avy any Bangladesh no tena be mpitady indrindra any Arabia Saodita satria mora indrindra ny karaman'izy ireo.
Tsy handràra ny fandefasana mpiasa an-trano vehivavy any Arabia Saodita i Bangladesh
Betsaka ny adihevitra ao amin'ny firenena taorian'ny fitomboan'ireo mpiasa vehivavy niverina nody any Bangladesh. Mpamakafaka Syed Ishtiaq Reza manameloka  ny fandefasana vehivavy ho any Arabia Saodita amin'ny filazana fa fampiroboroboana ny toekarena:
Marina tokoa fa manankarena amin'ny fanondranana olona any ivelany ny toekaren'ny firenena. Miankina betsaka amin'ireo vola vahiny miditra ireo ny toekarenan'i Bangladesh. Saingy ny fanontaniana dia hoe, tokony hanohy tsy hijery ireo fanararaotana ireo ve isika mba tsy hanimbana ny toekarentsika? Ny fanontaniako ho an'ny firenena – Inona no zo ara-dalàna ho an'ireo mpiasa an-trano niharan'ny fanararaotana ireo? Inona no sehatra azon'izy ireo iankinana mba hiarovany ny tenany sy ny zony ary hahazoany ny rariny?
Muntaha Jahan nisioka hoe:
সৌদিতে কোনো নারী যেন কাজে না যায়🙏😭 pic.twitter.com/U98B3logXr 
Tamin'ny 31 Oktobra, naverina tany Bangladesh avy any Arabia Saodita ny fatin'ilay vehivavy mpiasa an-trano Parvin Akter. Ny taratasy fanamarinana momba ny fahafatesany dia nilaza fa “famonoan-tena”. Saingy mandà izany ny fianakaviany. Nilaza izy ireo fa efa imbetsaka izy no nitaraina momba ireo fanararaotana ao amin'ny toerana iasany.
Maniry aho mba tsy hisy mpiasa vehivavy intsony handeha any Arabia Saodita, mandrakizay. 🙏😭
Dr. M R Karim Reza nanontany ny antony mahatonga ny governemanta tsy mandray fepetra ampy mba hanova ny toe-draharaha:
Fa maninona ny governemanta tsy mandray fepetra hampitsahatra ny fandefasana ireo mpiasa an-trano vehivavy any Arabia Saodita?
Araka ny voalazan'i  Selim Reza, sekretera ao amin'ny minisiteran'ny Fiarovana ireo Mpila Ravinahitra, nametraka trano azo antoka ho an'ireo vehivavy niharan'ny fanararaotana any Arabia Saodita ny governemanta ary nandray fepetra handràra sy hitory ireo “mpampiasa mpampijaly.”
Tao anatin'izany rehetra izany, tsy vonona ny hampitsahatra ny fanondranana olona any Arabia Saodita i Bangladesh, hoy ny  minisitry ny raharaham-bahiny. Mpanao gazety Ishrat Jahan Urmi nanoratra tao amin'ny Facebook :
## [..] Nilaza ny Minisitry ny Raharaham-bahiny androany fa mpiasa an'arivony no nankany Arabia Saodita. Nanontany izy hoe- “Firy ireo nitaraina fa tokony hatsahatrintsika ny tsena? Firy ny isan-jato?”
## Ireo vatana mangatsiaka naverina dia nanana taratasy fanamarinana momba ny fahafatesana izay milaza ny anton'ny fahafatesana fa “famonoan-tena” na “aretim-po”. Mijanona eo ny fanadihadiana. Ambonin'ny lalàna ny Saodiana.
## Tsy maintsy mandoa vola sy sarany 170.000 BDT (2.000 dolara Amerikana) ny mpampiasa Saodiana vao mahazo mpiasa an-trano Bangladeshita iray. Nihevitra izy ireo fa nividy andevo ary afaka manao izay tiany amin'ilay mpiasa vavy.
## Betsaka ireo mpiasa niharan'ny fanararaotana ara-pananahana niverina nody an-tanindrazana ary nahita fa tsy mila azy ireo intsony ny fianakaviana (fanilikilihana ny vehivavy voaolana). Tamin'ity taona ity dia nanampy vehivavy niverina 1.300 ny programa trano azo antoka.
## Ambonin'ny zava-drehetra, dia manana fiarahamonina manan-tombondahiny isika. [..] Heverin'izy ireo fa tia vola ireo vehivavy mahantra ireo ary lasa any ivelany tsy amin'ny antony. Be dia be ao amin'ity fiaraha-monina ity ireo olona ireo.
Manoloana ireo zava-tsarotra ireo, dia mitaky izahay mba hatsahatra ny fanondranana mpiasa vehivavy. Tsy ho haiko raha ho ren'ny maro ity tabataba ity. Saingy inona koa no azontsika atao?
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/11/19/144607/
 fanararaotana ara-nofo: https://www.middleeasteye.net/news/bangladesh-admits-female-workers-returning-saudi-arabia-because-sexual-abuse
 niverina nody: https://www.independent.co.uk/news/world/asia/saudi-arabia-bangladesh-women-migrants-abuse-sexual-harrasment-brac-a9080701.html
 Maherin'ny 100 ireo mpiasa an-trano Bangladeshy : https://www.benarnews.org/english/news/bengali/domestic-workers-10162019171510.html
 nipoitra niresaka: https://www.youtube.com/watch?v=RSPPCAY_6nU
 tantaran'ny fanararaotana: https://www.facebook.com/watch/?v=10155450499465978
 araka ny filazan'ny: https://www.bbc.com/bengali/news-44939979
 Nahasarika ny sain'ny vahoaka: https://blog.witness.org/2013/11/corporal-abuse-migrant-workers-saudi-arabia/
 9 tapitrisa: https://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_workers_in_Saudi_Arabia
 noraràn'i Indonezia: https://www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/article/1786581/indonesia-will-stop-sending-maids-middle-east-following
 Sri Lanka: https://www.aljazeera.com/news/asia/2013/01/20131252517879813.html
 Filipina : http://www.sundaytimes.lk/110710/BusinessTimes/bt36.html
 November 3, 2019: https://twitter.com/montahajahan/status/1190958683376648192?ref_src=twsrc%5Etfw
 October 28, 2019: https://twitter.com/Rezaderma/status/1188851854387470336?ref_src=twsrc%5Etfw
 hoy ny: http://www.banglatribune.com/national/news/579553/%E2%80%98%E0%A6%B8%E0%A7%8C%E0%A6%A6%E0%A6%BF-%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E2%80%99
 nanoratra tao amin'ny Facebook: https://www.facebook.com/israt.urmi.1/posts/10221552533581821